Les Actions De Semalt 5 Iziphakamiso Ezimemezelo Zethula I-Commerce Yakho Inkampani Ku-Échelle Internationale
Thumela noma yikuphi ukuthengiswa kwe-intanethi, ukukhuliswa kwakho kwe-couverture uthele amaqembu amaklayenti amazwe ngamazwe akukhethayo. Kunezinkampani eziningi ezihlelwe kahle eziye zazisebenzisa ukuze zifinyelele emhlabeni wonke. Ukumaketha kwe-intanethi kubandakanya ukufaka i-visibilité de votre marque vers les nouveaux sommets - bay area network cabling. Ukusebenza kwe-Engine Optimization (SEO) kuyindlela yokumaketha yezinqubo ezisetshenziselwa ukuhlinzeka nge-visibilité du moteur de recherche d'un site est élevé.
Njengoba uzimisele ukuqala ukukhangisa kwamanye amazwe, bheka ezinye izincomo ezinikezwayo, okushiwo ngu-Oliver King, ophethe i-client de la réussite Semalt .
1. I-Competence multiculturelle
Uma uthola ukufinyelela komphakathi jikelele, kunguhle ukuthi uthole unqulo lwewebhu Web available in multiple languages. Ngalokho, okubalulekile ukuqonda ama-barrières amasiko akho ngaphakathi kwendawo yakho geographical target. Okuqukethwe okukhethwa kukho futhi okumele ukwenze kufanele kube ngaphansi kwemigomo eyamukelekayo.
Ngokwezinye izimo, kubalulekile ukuqonda i-diversity culturelle phakathi kwezizwe eziningi. Abantu abahlukahlukene basebenzisa amafomu ama-plates en ligne kanye ne-hors line ukuze athole ama-tâches en ligne. Ngokwesibonelo, la plupart des Chinois sebenzisa masseurs instantanés njenge MSN Messenger noma QQ Messenger kanjalo ne-US esebenzisa WhatsApp. Uma kunjalo, i-China isebenzisa ama-moteurs de recherche njengo-Baidu kanti i-Europe isebenzisa i-Google.
2. Ukwenza umsebenzi wokukhangisa we-moteur de recherche locally
Kuyadingeka ukuba ukhethe le search engine ukuze ukhethe in the pays international que vous ciblez. Ngokwesibonelo, e-Chine, yenza SEO uthele ikhasi lewebhu ku-Baidu noma indawo yakwa-Google ingaba yi-idée evable. Ngokwe-niche yakho, abanye bangathanda ukukhetha i-Yahoo noma i-Bing. Le content kufanele ihlale indawo kodwa futhi efanelekayo ngangokunokwenzeka. Lokhu kuvela lapho amagama amaqembu aqala khona..
3. Ama-oda wami Izilungiselelo ISiphathi Sedivayisi ye-Android Cover art
Kuzo zonke izifundazwe, lezi zindawo zilawula indlela okukhiqizwa ngayo izidakamizwa, izigcawu kanye nokuthengisa. Ngokwesibonelo:
Ukukhokhela kumele kuvunyelwe ukugqugquzela ukukhiqizwa kokunye okukhethekile kanye nokulawula. Ngokwesibonelo, ukuqhathaniswa kwezokukhangisa kungaba okungalungile kwezinye izinkokhelo.
Règlementation des tactiques de vente
Ungakhokhela ezinye izinkampani ezikhethekile zokukhangisa. Izinqubo ezifana nezikhangiso noma izinkampani, izivumelwano kanye nezokuthengiselana ziyi-regulatory par le pays.
Leli phepha kumele likwazi ukukhululeka kokusetshenziswa kwayo, izici zalo zokuzibophezela, izinyathelo zokuphepha kanye nezinqubomgomo zalo.
4. Ukuthuthukisa i-web design web site
I-UX kufanele ibe yinto ebaluleke kakhulu ekumele ibuke lapho kusetshenzwa khona isayithi lewebhu ukuze lisebenzise umhlaba wonke. Les couleurs du site Web kumele zibonise izinkambiso ukuthi wena zifake phakathi kwe-strategy yakho marketing international. In the case of un site / d'une application avec une passerelle de paiement, le API du processus de paiement doit prendre en charge les conversions de devises dans leur devise d'origine. La vitesse de chargement doit être élevée sur le site Web wendawo.
5. I-Adopter le marketing des médias sociaux (SMM) ngezilimi ezahlukene
Lezi zinsuku zinezinketho zokubamba indawo. Ukusebenzisa ama-tactics SMM okufana nokukhangiswa okufakiwe.
Thumela noma yikuphi ukusebenzisana, i-nécessité d'établir un potentiel de marché sûr et adéquat est généralement le objectif principal. Beaucoup d'entrepreneurs pourraient vouloir ukuthuthukisa yabo izinkampani ngokubambisana nomhlaba wonke. Le un des moyens les plus efficaces pour rendre un site Web global est le marketing Internet. Sebenzisa iziphakamiso ezibhalwe kulesi sihloko, bese ubeka izimpawu zomhlaba wonke ngezifiso zokukhangisa ezilula ezifana ne-referencement.